Amathuba Wephrojekthi Nohlelo Lokusebenza - Beihai Composite Materials Co., Ltd.
Izithuthi, Ezokundiza Nezimboni Zezitimela.
Isakhiwo se-aluminium engasindi, ukumuncwa kwamandla nokulawulwa komsindo ukusebenza okuphezulu, ukuze inezinhlobonhlobo zezicelo ezimbonini zezimoto nezokuthutha.
Ubunjiniyela Nokwakha Imboni.
Ingasetshenziswa njengezinto zokumunca umsindo emhubheni wesitimela, ngaphansi kwamabhuloho onguthelawayeka noma ngaphakathi ngaphandle kwesakhiwo ngenxa yokufakwa kwawo kwe-acoustic okuhle kakhulu.
Imboni Yezokwakha Nezokwakha.
Ingasetshenziswa njengamapaneli wokuhlobisa ezindongeni nasesilingini, inikeze ukubukeka okuhlukile okuba nokukhazimula kwensimbi.
Ukulawula Isikhathi Sokubuyiswa Ngokuphumelelayo.
Ukuvimbela Imiphumela ye-EMP Ebangelwa Yimisebe Yenuzi.
Ingasetshenziswa ezikhathini ezilandelayo njengezindlu zamakhompiyutha zetelecom, izinsimbi ze-elekthronikhi, ukusakaza kanye nethelevishini nokunye, ngoba i-foam aluminium inomsebenzi omuhle kakhulu wokuvikela ugesi futhi ingavimbela imiphumela ye-EMP ebangelwe yimisebe yenuzi.
Ukuqeda Umsindo Nokumisa Umsindo.
Ingasetshenziswa kulezi zingosi ezilandelayo ukuqeda umsindo nokumisa umsindo: izinto zokulungisa amapayipi, ama-hend mufflers, amakamelo we-plenum, ama-workshops wokuhlanza, ama-workshops akhiqiza ukudla, izimboni zemithi, izitolo zokukhiqiza zensimbi eqondile, ama-laboratories, amawadi namagumbi okusebenza, ama-canteens , izikebhe namagumbi abagibeli, amakamelo, izinto zokupholisa umoya nezinto zokungenisa umoya.
(1) Isisindo esincane / esincane.
(2) Ukusebenza okuhle kwesihlangu somsindo (ukumuncwa kwe-acoustic).
(3) Ukumelana nomlilo / ukuvimba umlilo.
(4) Ikhono lokuvikela amagagasi elihle kakhulu.
(5) Umphumela omuhle wokubhafa.
(6) Ukuqhuba okuphansi kokushisa.
(7) Kulula ukucubungula.
(8) ukufakwa Easy.
(9) Izinto ezinhle zokuhlobisa.
(10) Ingahlanganiswa nezinye izinto (isb. Imabula, amashidi e-aluminium, njll.).
(12) Isetshenziswe kabusha ngokuphelele.